Izindaba - Ukungeniswa nokuthunyelwa kweChina ezinyangeni ezimbili zokuqala zalo nyaka kungaphezulu kakhulu kwalokho obekulindelwe yimakethe
Ukungenisa nokungenisa kweChina ezinyangeni ezimbili zokuqala zalo nyaka kungaphezulu kakhulu kwalokho obekulindelwe yimakethe
Ukungenisa nokungenisa impahla eChina ezinyangeni ezimbili zokuqala zonyaka bekungaphezulu kakhulu kwalokho obekulindelwe yimakethe, ikakhulukazi kusukela ngo-1995, ngokusho kwedatha ekhishwe yiGeneral Administration of Customs ngoMashi 7. Ngaphezu kwalokho, ukuhweba kweChina nabalingani abakhulu bezohwebo kuye kwanda kakhulu, okukhombisa ukuthi ukuhlangana kweChina nomnotho womhlaba sekujule kakhulu. AbakwaReuters babike ukuthi iChina ilawule ngempumelelo lolu bhubhane, futhi ama-oda wezinto zokwelapha ubhubhane phesheya ayaqhubeka. Ukuqaliswa kwezinyathelo zokuhlukaniswa kwabantu emakhaya emazweni amaningi kuholele ekugqashukeni kwesidingo sezimpahla zabathengi basekhaya nabakwa-elekthronikhi, okuholele ekuvulekeni kokuhwebelana kwangaphandle kwaseChina ngo-2021. Kodwa-ke, i-General Administration yamasiko iphinde yakhombisa ukuthi isimo somnotho emhlabeni wonke kuyinkimbinkimbi futhi kunzima, futhi ukuhweba kwangaphandle kweChina kunendlela ende okusamele ihambe.
Izinga lokukhula eshesha kakhulu lokuthunyelwa kwamanye amazwe kusukela ngo-1995
Ngokwedatha yeGeneral Administration yamasiko, inani eliphelele lokungeniswa nokuthunyelwa kwempahla kwezimpahla zaseChina ezinyangeni ezimbili zokuqala zalo nyaka ngama-yuan ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-5.44, ukwanda ngo-32.2% esikhathini esifanayo ngonyaka odlule. Phakathi kwabo, ukuthekelisa kwakuyi-yuan engu-3.06 trillion, yenyuka ngama-50.1%; ukungenisa bekuyi-yuan engu-2.38 trillion, kukhuphuke u-14.5%. Inani lifakwa kumadola aseMelika, kanti inani eliphelele lokungenisa nokuthumela eChina lenyuke ngo-41.2% ezinyangeni ezimbili ezedlule. Phakathi kwazo, ukuthekelisa kukhuphuke ngo-60.6%, ukungenisa kwenyuka ngo-22.2%, kanti ukuthekelisa kukhuphuke ngo-154% ngoFebhuwari. I-AFP igcizelele embikweni wayo ukuthi kwakuyisilinganiso sokukhula esisheshayo esake senzeka eChina ukuthekelisa kusukela ngo-1995.
I-ASEAN, i-EU, i-United States neJapane yibo ababambisene ngokuhweba abane eChina kusuka ngoJanuwari kuya kuFebhuwari, ngamazinga okukhula kwezohwebo angama-32.9%, ama-39.8%, ama-69.6% nama-27.4% ku-RMB ngokulandelana. Ngokusho kwe-General Administration yamasiko, ukuthunyelwa kweChina e-United States kwaba ngu-525.39 billion yuan, kukhuphuke ngamaphesenti angama-75.1 ezinyangeni ezimbili ezedlule, kanti imali esalele kwezokuhweba ne-United States yayiyi-yuan eyizigidi eziyizinkulungwane ezingama-33.44, ukwanda ngamaphesenti angama-88.2. Esikhathini esifanayo ngonyaka odlule, ukungenisa nokungenisa phakathi kweChina ne-United States kwehle ngamaphesenti ayi-19.6.
Ngokuvamile, isilinganiso seChina sokungenisa nokuthekelisa ezinyangeni ezimbili zokuqala zalo nyaka asikho kude nje nesikhathi esifanayo sonyaka odlule, kodwa futhi sikhuphuke cishe ngama-20% uma kuqhathaniswa nesikhathi esifanayo ngo-2018 nango-2019 ngaphambi kokuqubuka. UHuojianguo, iphini likamengameli weWorld Trade Organisation Research Association of China, utshele izikhathi zomhlaba ngoMashi 7 ukuthi ukungenisa nokukhishwa kweChina kwancipha ezinyangeni ezimbili zokuqala zonyaka odlule ngenxa yomthelela walolu bhubhane. Ngokuya ngesisekelo esiphansi, imininingwane yokungenisa nokuthekelisa kulo nyaka kufanele isebenze kahle, kepha imininingwane ekhishwe yi-General Administration yamasiko isadlula kude kakhulu okulindelwe.
Ukuthengiswa kweChina kwenyuka ezinyangeni ezimbili zokuqala zonyaka, kukhombisa ukufuneka okunamandla komhlaba kwezimpahla ezikhiqizwayo, futhi kwahlomula ekwehleni kwesisekelo ngenxa yokuntengantenga komnotho ngesikhathi esifanayo ngonyaka odlule, kusho ukuhlaziywa kweBloomberg. IGeneral Administration of Customs ikholelwa ekutheni ukukhula kwezokuhwebelana kwamazwe angaphandle kweChina kanye nokuthekelisa emazweni angaphandle ezinyangeni ezimbili zokuqala kusobala, “akubuthakathaka ngesikhathi sangesikhathi”, okuqhubeka nokubuyela emuva okusheshayo kusuka ngoJuni nyakenye. Phakathi kwabo, ukwanda kwesidingo sangaphandle esidalwe ukutholakala komkhiqizo nokusetshenziswa emnothweni waseYurophu nowaseMelika kuholele ekukhuleni kwempahla ethunyelwa eChina.
Ukwanda okuphawulekayo kokungeniswa kwempahla eluhlaza engukhiye
Umnotho wasekhaya ubulokhu uthuthuka ngokuqhubekayo, futhi i-PMI yomkhakha wezokukhiqiza isezingeni lokuchuma futhi ibuna izinyanga eziyi-12. Ibhizinisi linethemba elikhulu mayelana nokulindelwe esikhathini esizayo, okukhuthaza ukungeniswa kwesekethe elihlanganisiwe, imikhiqizo yezinsizakusebenza zamandla ezifana nesekethe elihlanganisiwe, insimbi yensimbi kanye nowoyela ongahluziwe. Kodwa-ke, ukwehla okukhulu kwamanani wamazwe omhlaba wezimpahla phakathi kwezigaba ezahlukahlukene nakho kudala ushintsho olukhulu kumanani wevolumu yalezi zinto lapho iChina izingenisa.
Ngokwemininingwane ye-General Administration of Customs, ezinyangeni ezimbili zokuqala zonyaka, iChina yathumela ngaphandle amathani ayizigidi ezingama-82 wensimbi, okwenyuka ngo-2.8%, inani lentengo elijwayelekile lokungenisa u-942.1 yuan, lenyuka laya ku-46.7%; uwoyela ongahluziwe ovela ngaphandle ufinyelele kumathani ayizigidi ezingama-89.568, ukwanda ngo-4.1%, kanti inani elijwayelekile lokungenisa kwakungu-2470.5 yuan ngethoni, lehla ngo-27.5%, okuholele ekwehleni okungama-24.6% kwenani eliphelele lokungenisa.
Ukungezwani kokuhlinzekwa kwe-chip yomhlaba nakho kuthinte iChina. Ngokusho kweGeneral Administration of Customs, iChina lingenise amasekethe ahlanganisiwe angama-96.4 billion ezinyangeni ezimbili zokuqala zonyaka, ngenani eliphelele lama-yuan angama-376.16 billion, ngokunyuka okuphawulekayo kuka-36% no-25.9% ngobuningi nangemali uma kuqhathaniswa nokufanayo isikhathi ngonyaka odlule.
Mayelana nokuthekelisa, ngenxa yokuthi ubhadane lomhlaba alukakaqhamuki esikhathini esifanayo ngonyaka odlule, ukuthunyelwa kwezinsimbi zokwelapha nemishini eChina ezinyangeni ezimbili zokuqala zalo nyaka kwakuyizigidi eziyizinkulungwane ezingama-18.29, okwenyuka okukhulu 63.8% uma kuqhathaniswa nesikhathi esifanayo ngonyaka odlule. Ngaphezu kwalokho, ngenxa yokuthi iChina yahola ekuphatheni ngempumelelo i-COVID-19, ukuvuselelwa nokukhiqizwa kweselula kwakukuhle, futhi ukuthunyelwa komakhalekhukhwini, izinto zasendlini kanye nezimoto kwakhule kakhulu. Phakathi kwabo, ukuthekelisa omakhalekhukhwini kukhuphuke ngama-50%, kanti ukuthunyelwa kwemishini yasekhaya nezimoto kufinyelele kuma-80% no-90% ngokulandelana.
UHuojianguo uhlaziyele ezikhathini zomhlaba ukuthi umnotho waseChina uqhubeke nokuba ngcono, ukuzethemba kwezimakethe kubuyiselwe futhi ukukhiqizwa kwamabhizinisi bekukuhle, ngakho-ke ukuthengwa kwezinto ezisetshenzisiwe kukhuliswe kakhulu. Ngaphezu kwalokho, ngenxa yokuthi isimo esiwubhadane phesheya sisasakazeka futhi amandla angeke abuyiselwe, iChina iyaqhubeka nokudlala indima yesisekelo sokukhiqiza somhlaba wonke, ihlinzeka ngokusekelwa okuqinile ekululameni komqedazwe womhlaba.
Isimo sangaphandle sisalusizi
IGeneral Administration of Customs of China ikholelwa ekutheni ukuhwebelana namanye amazwe aseChina sekuvule iminyango ezinyangeni ezimbili ezedlule, nokuvule ithuba elihle lonyaka wonke. Ucwaningo lukhombisa ukuthi ama-oda wokuthekelisa amabhizinisi amaShayina okuthekelisa akhuphukile eminyakeni yamuva, ekhombisa ukulindela okuhle esimweni sokuthekelisa ezinyangeni ezi-2-3 ezizayo. IBloomberg ikholelwa ekutheni ukuthekelisa okuthe xaxa okuthunyelwa emazweni angaphandle kweChina kwasiza ukuxhasa ukululama kweChina kulesifo u-V nokwenze iChina kwaba ukuphela kwezwe elikhulayo emnothweni omkhulu womhlaba ngo-2020.
NgoMashi 5, umbiko womsebenzi kahulumeni waveza ukuthi umgomo wokukhula komnotho waseChina ngonyaka ka-2021 wawubekwe ngaphezu kwamaphesenti ayisithupha. UHuojianguo uthe ukuthunyelwa kwamanye amazwe kweChina kukhuphuke kakhulu ezinyangeni ezimbili ezedlule ngenxa yokuthi ukuthunyelwa kwamanye amazwe kufakiwe kwi-GDP, kubeka isisekelo esiqinile sokufeza inhloso yonyaka ophelele.
I-Novel coronavirus pneumonia nayo iyasabalala emhlabeni jikelele, futhi nezimo ezingazinzile nezingaqinisekile esimweni samazwe omhlaba ziyanda. Isimo somnotho womhlaba siyinkimbinkimbi futhi sinzima. Ukuhweba kwangaphandle kweChina kusakhula ngokuqinile. UHuweijun, umqondisi wezomnotho waseChina eMacquarie, okuyisikhungo sezezimali, ubikezela ukuthi ukukhula kweChina emazweni angaphandle kuzokwehla ezinyangeni ezimbalwa ezizayo zalo nyaka njengoba amazwe athuthukile eqala kabusha ukukhiqiza izimboni.
"Izici ezithinta ukuthunyelwa kweChina emazweni angaphandle kungenzeka ukuthi ngemuva kokuthi isimo sesifo siqediwe ngempumelelo, amandla omhlaba abuyiselwe futhi ukuthengiswa kweChina kungancipha." Ukuhlaziywa kweHuojianguo kuthe njengezwe elikhiqiza kakhulu emhlabeni iminyaka eyi-11 ilandelana, uchungechunge oluphelele lwezimboni eChina kanye nokusebenza kahle komkhiqizo ngokuncintisana ngeke kwenze ukuthunyelwa kweChina kwehle kakhulu ngo-2021.